Farmaajo oo maanta tagaya Magaalada Qardho +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Farmaajo oo maanta tagaya Magaalada Qardho +COD
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay oo Arbaco ah ku wajahan magaalada Qordho oo ka tirsan Puntland.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa oo booqasho ku maraya qeybo ka mid ah gobolada dalka ayaa tan iyo Axadii ina dhaaftay waxa ay ku sugnaayeen magaalada Garowe eee caasimadda Puntland, halkaasi oo ay kula kulmeen Madaxda iyo shacabka Puntland.
Wariyeyaasha degaanada Puntland ayaa soo sheegaya safarka Madaxweynaha inuu yahay mid dhulka ah, oo qaadanaya laba saacadood, waxaana wafdiga Mdaxweynaha qeyb ka ah Madaxda sare ee Puntland iyo qaar ka tirsan xubnaha labada Gole ee Dowladda Federaalka.
Wadooyinka waa weyn ee magaalada Qardho ayaa lagu xardhay Calanka buluuga ah ee Soomaaliya iyo kan Puntland, waxaana wadooyinka isugu soo baxay dadweyne fara badan oo u heelan soo dhaweyna Madaxweynaha.
Ammaanka magaalada Qardho ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana sugaya ammaanka Ciidamada Puntland iyo kuwa Madaxtooyada Soomaaliya oo si hordhac ahaan halkaasi u horey ugu gaaray.
Taliyaha Booliska Magaalada Qardho ayaa sheegay inay adkeeyeen oo ay xoojiyeen amniga guud ee Magaalada, wadooyinka qaarkoodna ay ciidamo soo dhigeen.
Madaxweynaha oo sacdaalkiisa uu yahay mid ku qotomo nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa magaalada Qardho kula kulmaya qeybaha kala duwan ee bulshada, si uu ugu dhiirageliyo in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka.